Galaxy S7 iyo S7 gees waxay heleen cusboonaysiinta amniga Maarso | Androidsis
Manuel Ramirez | | Samsung, Amniga
Estamos ku dhowaad 4 sano ka dib markii la bilaabay Galaxy S7 iyo S7 Edge walina waxay ku sii hayaan helitaanka dhamaan macluumaadka muhiimka ah ee taleefoonka. In kasta oo ay wax walba is beddeli karaan bisha soo socota, maaddaama aan geli doonno sannadka shanaad oo uu haddaba jiro daabacad yar.
Labadan taleefan ee Samsung ayaa helay cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay ee ugu dambeysay ee Android leh nooca 8.0 kaas oo loogu magac daray Oreo. Qaar ka mid ah S7 oo qayb ka ahaa, gaar ahaan cirifka, luqaddaas naqshadeynta cusub oo leh dhinacyo qaloocsan iyo inaan sii wadno inaan ku aragno dhamaadka sare ee Samsung.
Si kale haddii loo dhigo, Shirkadda weyn ee Kuuriyada Koofureed ayaa sii wadaysa inay si rasmi ah u soo bandhigto cusbooneysiinta amniga, laakiin sidaan soo sheegnay, laga bilaabo bishaan waxbaa is bedeli kara, maadaama aan geli doonno sanadkii shanaad ee cusbooneysiinta.
Kuwani waxaa loogu talagalay kaliya in la sii daayo cusbooneysiinta markay muhiim yihiin. Taasi waa, mar dambe ma arki doonno cusbooneysiintaas xilliyeed, laakiin halkii ay ka cayiman lahaayeen waxay ahaan lahaayeen si aan qatar loo gelin amniga taleefannada, isla mar ahaantaana tan kuwa adeegsada.
Xaqiiqdii, labada S7 iyo S7 Edge waxay heleen shaashadda amniga ee Maarso si ay ula jaan qaadaan inta ka hartay dhamaadka shirkadda Korea. Tilmaamaha Samsung ee taleefannadooda ayaa loogu talagalay 3 sano markii la helayay wararka amaanka, mid afraad oo wata cusbooneysiin saddexdii biloodba mar iyo mid shanaad oo leh dhaliisha oo si fiican loogu baahan yahay.
Haddii aad leedahay mid ka mid ah taleefannadan, ha daahin inaad hubiso haddii aad horay u haysatay cusboonaysiinta goobaha ay ka yimaadeen. Ama waan awoodnaa hel shirkadaha adag ee S7 iyo S7 keydadka, iyo in marar badan ay yihiin meesha ugu fiican ee lagu cusbooneysiin karo taleefannada ka hor inta aan la helin sabirka quduuska ah ee ay ku gaaraan OTA.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Galaxy S7 iyo S7 Edge waxay sii wadaan inay helaan cusboonaysiinta amniga
Aad u fiican! Waa maqaalkii ugu horreeyay ee aan ka helo cusboonaysiinta ugu dambaysa. Waxay ii soo baxday inaan rakibay shalay ka hor maantana taleefanka ayaa si lama filaan ah u damiyay si aan hore loo arag.
Waan niyad jabay .. Waxaan hayaa tan iyo 2017, waxaan isku dayay inaan sameeyo nooc kasta oo reboots ah (reboot caadi ah, oo lagu qasbay mugga hoos, lagu qasbay mugga korkiisa, labadaba badhanka guriga iyo waxba and). Waxaan la xiriiray Samsung Custom Care waxna ma qaban karaan maaddaama aysan jirin wax gargaar ah oo ay ugu wacan tahay Covid19.
Waxa kale oo aan cadeeyay markii aan ku oogay inaan wax lacag ah bixinaynin (casaanka amarka cas lagu shito isna ma iftiimaayo) Gabagabadii, gebi ahaanba waa dhimatay.
Fadlan, haddii wax la mid ah ay ku dhacday qof oo ay awood u yeesheen inay xalliyaan, waan ku faraxsanahay caawimaadda.
Sida loo beddelo xalka shaashadda Android
Sida loo beddelo ogeysiiska LED-ka ee EMUI 10